Falanqeynta:.Juventus Vs Barcelona Wax Ka Baro Taariikhda Labdan Koxood ay isku Le yihiinm - RADIOHAATUF| FM 101.0 MKHzRADIOHAATUF| FM 101.0 MKHz
Home / Cayaaraha / Falanqeynta:.Juventus Vs Barcelona Wax Ka Baro Taariikhda Labdan Koxood ay isku Le yihiinm
Posted by: radiohaatuf fm in Cayaaraha April 11, 2017	0 221 Views
Juventus ayaa soo dhawaynaysa kooxda Barcelona oo ay xusuus xun kaga haysato kulankii finalkii Champions leaque-ga ee sanadkii 2015 kii markaas oo ay kooxda Luis Enrique koobka ka qaaday Old Lady kulankii ka dhacay Berlin ee dalka Germany. Kulankan ayaa ku celis u ah finalkii ay Juventus ku seegtay koobka Champions Leaque-ga, waxayna doonayaan in ay markooda ka aarsadaan Balaugrana isla markaana ay ku reebaan wareega sideed dhamaadka tartankan.
Juventus ayaa kulankan ciyaaraysa iyada oo 21 kii kulan ee ugu danbeeyay ee tartamada kooxaha yurub aan wax guuldaro ahi ku soo gaadhin gurigeeda Juventus Stadium, waxayna sidoo kale kulankan ciyaaraysaa iyada oo aan waligeed guuldaro garoonkeeda kagala kulmin kooxda martida u ah ee Barcelona. Juventus ayaa ah kooxda laabad ee kaliya oo aan xili ciyaareedkan wax guuldaro ah la soo kulmin Champions Leaque-ga waxayna la wadaagtaa Real Madrid oo aan ilaa heerkii groupyada wax guuldaro ah soo arkin.
TARTANKA: Lugta Hore Ee Sideed Dhamaadka Champions Leaque-ga
GARSOORAHA: Szymon Marciniak(Poland)
Dhinaca kale Barcelona ayaa kulankan iskeenaysa iyada oo qaab layaableh oo taariikhi ah ku soo gaadhay wareega sideed dhamaadka Chamopions Leaque-ga kadib markii ay si layaableh 6:1 ugu soo xasuuqday Paris Saint-Germain oo kulankii lugta kowaad ay guuldaro 4:0 ahayd kala soo laabtay. Laakiin Barcelona ayaa ugu yaraan doonaysa in kulanka Juventus uu ka duwanaado kii ay ceebta kula soo kulmeen Paris oo ay ugu yaraan goolal ku soo dhaliyaan Turin.
Juventus ayaa afartii kulan ee ugu danbeeyay Champions League-ga soo guulaysatay waana kooxda kaliya ee ay kulamada ugu badan oo xidhiidh ah soo guulaystay balse sidoo kale Old Lady ayaan wax gool ah laga dhalin 351 kii daqiiqdo ee ugu danbeeyay Champions Leaque-ga waana waqtiga ugu dheer ee ay kooxihi shabaqa kooxdeeda ilaashatay dhamaan sideeda kooxood ee Champions Leaque-ga iskugu soo hadhay.
Goolkii ugu danbeeyay ee Juventus looga dhaliyay Champions Leaque-ga ayaa ahaa goolkii uu Nico Pareja u dhaliyay Sevilla bishii November ee 2016 kii. Laakin Allegri ayaa sheegay in MSN ay damaanad qaadi karaan in ay goolal ku dhaliyaan Juventus Stadium balse ay kooxdiisu diyaar buuxa kulankan u tahay.
Waxyaabaha layaabka leh ee Juventus xili ciyaareedkan ka dhigay koox khaas ah ee kulamada Champions Leaque-ga ayay ka mid tahay in ay tahay kooxda kaliya ee goolasha ugu yar laga soo dhaliyay ilaa heerkii groupyada ee Champions Leaque-ga waxaana 8 kulan looga soo dhaliyay kaliya 2 gool. Guuldaradii ugu danbaysay ee Juventus garoonkeeda ku soo gaadhay ayaa ahayd April 2013 markaas oo Bayern Munich 2:0 guul ku soo gaadhay.
Kooxaha Barcelona iyo Juventus ayaa xili ciyaareedkan ah labada kooxood ee rekoodhayaasha ugu badan loo dhigay Champions Leaque-ga iyada oo Barcelona 4 rekoodhe lagu abaal mariyay kadib markii ay difaacyada ka soo horjeeday qaladaad galeen halka Juvnetus lagu abaal mariyay 3 rekoodhe.
MAXAY LABADA TABABARE KULANKAN KA YIDHAADEEN?
Massimiliano Allegri: “Marka aad kulanka lugta hore ku ciyaarayso gurigaaga markasta waa wax fiican in aan goolal lagaa dhalin. Koox Barcelona oo kale ah wax sahlan ma noqon doonto iyada oo uu kiiskayagu ka sii adag yahay in aanu goolal ka badalin iyaga ka dhalino. Ma qiyaasan kartid in aad Barcelona laba jeer la gaasho barbaro gool la’aan ah oo aad rekoodhayaal ku guulaysanayso”.
Massimiliano Allegri ayaa hadalkiisa sii raaciyay: Kuwani waxay noqon doonaan laba kulan oo qurux badan. Xaqiiqdii anagu wax walwal ah ma qabno. Anagu ixtaam wayn ayaanu u haynaa Barcelona laakiin si fiican ayaanu u diyaar garawnay. Waxaanu u baahanahay in aanu difaac ahaan u fiicnaano, sababtoo ah dagaalka wareega xigaa waa 180 daqiiqo. Waa wax iska caadi ah in uu yahay mid adag, sababtoo ah waxaanu wajahaynaa koox aad u adag. Waxaa waajib nagu ah in aanu wax badan u qabano farsamo ahaan, tatiko ahan iyo heerka jidh ahaaneedba, kadib waxaanu baahanahay in ay iyagu yara nasiib xumaadaan”.
Luis Enrique: ” Waxaa jira dhawr ciyaartoy oo ka duwan marka la barbar dhigo finalkii Berlin. Juve wali waa koox wayn, laakiin anigu ma sheegi karo in ay ka fiican yihiin ama ka xun yihiin sidii ay ahaayeen laba sanadood ka hor. Anigu xusuus wayn ayaan ka haystaa finalkaas, laakiin kulankani waa mid gabi ahaanba ka duwan. Anigu umaba baani in aan ciyartoyda dhiiro galiyo kulan sideed dhamaadka ah oo Juventus oo kale ah”.
Enrique ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Anigu waxaan daawaday kulamo badan oo Juventus ah, waxayna markasta isku dayayaan in ay qayb kasta oo garoonka ah ciyaartoydooda ugu soo rogaan. Waxaanu isku dayi doonaa in aanu guulaysano sidii aanu markasta samayn jirnay. Sergio Busquets waa ciyaartoy aad muhiim anaga noogu ah. Istatikadiisa ayaa hadlaysa, waxaa waajib nagu ah in aanu isaga badalno”.
Juventus waxaa kulankan ka maqnaan doona isla markaana inta xili ciyaareedkan ka hadhay seegaya xidiga ree Croatia ee Marko Pjaca kaas oo dhawaan qaliin maray. Laakiin Allegri ayaa shaxdiisa dib ugu soo dhawayn doona saddexda difaac ee Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci iyo Dani Alves kuwaas oo la nasiyay kulankii ugu danbeeyay.
Alves oo waqti layaableh ku soo qaatay Barcelona ayaa markii ugu horaysay isaga oo xidhan garanka Juventus ka hor iman doona kooxdiisii hore ee Barca ee uu koob kasta kula soo guulaystay. Waxa uu shaki ku jiraa taam ahaanshihiisa buuxa gool dhalyaha ree Croatia ee Mandžukić inkasta oo loo badainayo in uu taam buuxa noqon karo. Juan Cuadrado ayaa hal kaadh oo digniin ah u jira in uu seego kulanka lugta labaad ee Camp Nou.
Dhinaca Barcelona waxaa kulankan dhaawacyo ku seegaya Aleix Vidal, Arda Turan iyo Rafinha balse warka ugu wayn ayaa ah in Sergio Busquets uu kulankan ganaax ku seegayo kadib markii uu kaadhkii digniinta ahaa ee uu ganaaxan ku mutaystay uu qaatay kulankii PSG ee Camp Nou.
Laakiin sidoo kale kulanka Turin waxaa halis wayn ugu jira in ay ganaax ku seegaan kulanka lugta labaad ee Camp Nou saddex xidiga oo Barcelona aad muhiim ugu ah iyada oo Gerard Pique, Ivan Rakitic iyo Neymar JR ay min hal kaadh oo digniin ah u jiraan in ay ganaax hal kulan ah ku seegaan kulanka ay Juventus soo dhawayn doonto Barcelona ee Camp Nou ka dhici doona.
Previous: Falanqeynta:.Borrusia Dortmund vs As Monaco – Wax Walba Oo Ku Saabsan Kulanka Ka Dhici Doona Jarmalka.
Next: DHAGEYSO:.Warka Subax Idaacada Haatuf 11-04-2017